सावधान ! सामान्य होसियारी गुमाउँदा २ बालिकाको मृत्यु, ८ जना सिकिस्त [सचेतनाका लागि सेयर गरौ] « The News Nepal
सावधान ! सामान्य होसियारी गुमाउँदा २ बालिकाको मृत्यु, ८ जना सिकिस्त [सचेतनाका लागि सेयर गरौ]
पाल्पा । पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका–३ झिरुवासको सार्कीडाँडामा सामान्य होसियारी अपनाउँन नसक्दा २ बालिकाको अकालमा ज्यान गएको छ । त्यहाँ खान नहुने भन्ने होसियारी नअपनाई जङ्गली च्याउ खाँदा दुई बालिकाको मृत्यु भएको हो ।
चितवनस्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पोखरेलले जानकारी दिए। बिरामी हुनेमा ४५ वर्षीय पुरन खाम्चा, उनकी श्रीमती ४० वर्षीया चन्द्री खाम्चा, १५ वर्षीया छोरी निर्मला खाम्चा, ८१ वर्षीय प्रेमबहादुरसिंह ठकुरी, ३० वर्षीया दानकुमारी सिंह, सात वर्षीय सुमन सिंह, धनकुमारी सिंह र निरुता सिंह ठकुरी रहेका छन्।
यो समय धेरै नेपाली जंगली च्याउका कारण मृत्युबरण गरिरहेका छन् । जंगलका सबै च्याउ खान योग्य हुँदैनन् भन्ने सचेतनाको सन्देश दिन जरुरी छ । अकालको मृत्युवरण रोक्न यो सन्देश देख्नेजतिले सेयर गरिदिनुहोला ।